အင်ဂျင်ပါဝါ - ၁၈၀၀ စီစီ Back Camera , Original TV Auto Gear Air Bag - ၂လုံး Speaker - ၄လုံး ဈေးနှုန်း - ၁၄၅ သိန်း (ညှိနှိုင်း) လိပ်စာ - G5 Car Showroom 01-8500144 No(302/7),Zizawar Housing,Thanthumar Rd,North Oakkalarpa Tsp.
Car Review of “TOYOTA COROLLA 2014” iMyanmarCars
အင်ဂျင်ပါဝါ - ၁၆၀၀ စီစီ Air Bag - ၂လုံး Censor - ၄လုံး Audio CD Drive ၊ ဆီစားသက်သာ ဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ သုံးသောင်းကျော် ( အပြီးအစီး) လက်ရှိ ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနှင့် တွက်သည်။ လိပ်စာ - MINGALAR MOTOR Co,Ltd. အမှတ်(၆)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်။
Made In Korea (ပုံပြောင်း) အင်ဂျင်ပါဝါ - 2.5 CC 12 ယောက်စီး ဘယ်မောင်း Auto ဂီယာ Air Bag - ၂ လုံး ဈေးနှုန်း - 140 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖုန်း - 09-30002099 လိပ်စာ - World 99 Car Showroom No(2),Yadanar Rd,Thingangyun Tsp. iMyanmarCars.com အခမဲ့ ကားရောင်း၊ကားဝယ်ဝဘ်ဆိုဒ်
DFM H-30 CROSS 2014
အင်ဂျင်ပါဝါ - ၁၆၀၀ စီစီ Air Bag - ၄ လုံး Speaker - ၆ လုံး Original TV , DVD Player Back Camera , Censor Steering Volume Control , Bluetooth ဈေးနှုန်း - ၂၀၀ သိန်း ( ကြိုတင်မှာယူရန်) ဖုန်း ၀၁ -၂၃၀၄၈၀၁ လိပ်စာ - DFM Car Showroom အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
DFM S-30 2014
အင်ဂျင်ပါဝါ - ၁၆၀၀ စီစီ Air Bag - ၄ လုံး Speaker - ၆ လုံး Original TV , DVD Player Back Camera, Censor Steering Volume Control , Bluetooth ဈေးနှုန်း - ၁၉၀ သိန်း ( ကြိုတင်မှာယူရန်) ဖုန်း ၀၁ -၂၃၀၄၈၀၁ လိပ်စာ - DFM Car Showroom အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။